Barcelona oo Qabatay Hogaanka Horyaalka Spain iyo Messi oo hat-trick Dhaliyay ” SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Barcelona oo Qabatay Hogaanka Horyaalka Spain iyo Messi oo hat-trick Dhaliyay ” SAWIRRO”
Kooxda Barcelona ayaa qabatay hogaanka horyaalka Spain ee La Liga,ka dib markii ay garoonkeeda Camp Nou 6-1 uga badisay kooxda Rayo Vallecano.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 12-daqiiqo gudahood ku dhaliyay sedax gool (hat-trick).
Ciyaaryahan Messi ayaa dhaliyay hat-trick-gii 24-aad oo uu ka dhaliyo horyaalka Spain ee La Liga,waxana uu dhanka gool dhalinta horyaalka Spain la sinmay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo,iyadoo wada leh min 30-gool.
Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Barcelona,halka goolka kale uu u dhaliyay ciyaaryahan Gerard Pique.
Kooxda Barcelona ayaa waxaa kaarka casaanka ah ka qaatay ciyaaryahan Daniel Alves,halka kooxda Rayo Vallecano uu kaarka casaanka ah ka qaatay ciyaaryahan Tito.
Kooxda Barcelona ayaa qabatay hogaanka horyaalka Spain ee La Liga,iyadoo ka faa’ideysatay guul darradii ay xalay kooxda Real Madrid kala kulantay kooxda Athletic Bilbao.
Kooxda Barcelona ayaa horyaalka Spain ee La Liga ku hogaamineyso 62-dhibcood,halka kooxda Real Madrid ay leedahay 61-dhibcood.
Kooxda Rayo Vallecano ayaa kala horeynta horyaalka Spain uga jirto kaalinta 11-aad,waxana ay leedahay 29-dhibcood.
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo qeybgalaya Shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda Carabta
Dowladda oo soo dhaweysay in Zakiriye laga saaro liiska argagixisada ee ay Mareykanku baadi goobayaan